Date My Pet » 7 Tips Nokuti Romantic Relationship
Mutumwa rudo pasuo renyu? Muri mumwe rombo ndivo, asi ikozvino unofanira kuchengeta murazvo. sei vaya vakaroorana husingaperi kuzviita? Ndizvozvo kutarisa nenhungamiro yavo uye vanoedza kudzidza chinhu kwavari. Heano mamwe dzavo zvakavanzika uye mazano kukubatsira kuramba anobudirira kudanana:
1. kuvimba pachako
Hazvisi zvose pamusoro pako, asi yakawanda ukama nyaya vanowana zvinyorwa zvavo vaviri’ kuzvivimba. chaizvo, asati rudo munhu, une kuva wakakwana sungano pachako, kuda uye kuvimba pachako. Ari murume nomudzimai hakusi mukana kuvanda shure munhu. Ko iye / iye rinobwinya? Regai zvibvunze nei / iye anewe. pachinzvimbo, kuva nechokwadi iwe kuita mutambo wakanaka. Iye / iye ane mukana kuva mumwe akaita sewe. Pasina kuva kuzvivimba, unofanira kuona pachako kuti zvauri, uye nokuti chii mudiwa wako anoona mamuri.
2. Tsimwaira godo renyu
Kuva murume nomudzimai zvinoreva kufamba pamwe chete mirayiridzo. Achivimba mumwe kunokosha uye vakarondedzera wenyu nechivimbo zvakananga. mumwe wako anoronga kuva manheru neshamwari mubhawa? Mupei / her vamwe nzvimbo uye regai akarwisa navo mibvunzo yakaita: vaiva imi apo? Vaiva vasikana ikoko / vakomana? Godo ndiro unonetesa uye zvechokwadi ndiyo nzira yakanakisisa kuti atume munhu kure.
Chimwe chinhu chakanaka kwazvo chine ari murume nomudzimai kuti une mumwe munhu kukutsigira munguva dzokushayiwa. Gamuchira encouragements, uye vave nemafungiro akadaro apo mumwe wako anochida. Munhu ari kubudirira ukama vachakuudza kuti kudanana vakaroorana vari, kutanga kwazvose, akatendeseka uye kutsigira shamwari mumwe, uye chete pashure, vadikani.
4. Anoshamisika mumwe
Tose vanonzwa zvakaipira muitirowo, Ngura ichi kuti anotendeuka iwe sweetie kupinda pamubhedha matapiri. Tose tine tsika dzedu shoma kuti kuzadza hwedu, asi kana uchida kuchengeta murazvo wako ukama kuti kukwira, musaedza kunyatsoziva ne zuva nezuva pasina dzinokanganisa muhupenyu hwako. Buda pamwe, kugoverana zviitiko itsva. Rangarirai kuti rudo akafanana mwana, rinofanira zvokudya.
Open kutaurirana ndiyo surefire nzira ukama ane simba. Kunokubatsira kuzivana zviri nani, kunzwisisa manzwiro aunoita pamusoro zvakasiyana nyaya, uye ona pfungwa yeumwe. Regai kuvaka jecha nematende! Kukurukura nemumwe uye nheyo dzako ukama richadimburirwa cemented muna kongiri.
6. Tora nguva woga
A ukama unoda vakazvitsaurira nguva, asi izvi hazvirevi kuti mumwe nomumwe havagoni kuva chinhu kunze. Vachakangowandisa shamwari dzako, zvinhu enyu basa! Kutsaurira nguva navo uye kuti iwe woga. A maawa kunze mashomanana kubva mudiwa wako achaita kuti uve kusuwa uye kunzwisisa mumwe kupfuura.
7. Iva akatendeseka kune mumwe
Kutendeseka ane vakadzikama hwaro kutomboshamwaridzana ukama. Iva akatendeseka mumwe kukurukura manzwiro ako nemashoko kana vasiri nemashoko. Izvi zvichaita chete kuti kubatana kwenyu kusimba.